ဘယ်သူ့မှာ အပြစ်ရှိလဲဗျာ….ကြားထဲက ကလေးငယ်ခမျာ သနားစရာ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ဘယ်သူ့မှာ အပြစ်ရှိလဲဗျာ….ကြားထဲက ကလေးငယ်ခမျာ သနားစရာ
Royal Darli and Amy Aung San shared အင်တာနတ်‘s photo.
၁.၁.၂၀၁၃ ရက်နေ့ ညနေမှာ တစ်တန်းကျောင်းသားလေးက လမ်းဘေးမှာ ကစားနေရင်း စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့လွှတ်ကျောင်းထားတဲ့ နွားအုပ်တစ်အုပ်ရောက်လာပြီး အထဲက နွားတစ်ကောင်က ကလေးငယ်ကို ကန်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကလေးခမျာ လမ်းဘေးမှာပဲ လဲကျပီးသတိလစ်သွားတာခနခနပါပဲ။ လူကြီးတွေရောက်လာပီး နှာတွေမှုတ်မှ သတိပြန်လည်လာပြီး ဆေးခန်းသွား ပြခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုပြီ ဆေးနှစ်လုံးထိုးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်မိသားစုက ကလေးမေးစေ့နာနေလို့ ဓါတ်မှန်ရိုက် ချင်တာနဲ့ သွားရိုက်ပီး ဘေးကပ်လျှက်က နောက်ထပ်ဆေးခန်းကို ထပ်ပြတော့ မေးစေ့ က အရိုးအက်သွားလို့ ဆေးရုံကို ချက်ချင်းတက်ဖို့ ဆေးစာရေးပြီး ညွှန်လိုက်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆေးရုံကို ချက်ချင်းတက်ပီး ဆေးကုသမှုခံယူပါတယ်။ ကုသမှု ခံယူတယ်သာပြောတယ်။ရောက်ကတည်းက ပါရာစီတမောနဲ့ ဘာမီတွန် နှစ်မျိုးဘဲ တိုက်တယ်တဲ့ဗျာ။ အံ့ရော.. ဆေးရုံတဲ့ဗျာ..။
နွားရှင်ကလည်း ကိုယ်တိုင်မလိုက်ပါဘဲ ကိုယ်စားလှယ်ဆိုသူကိုလွှတ်လို့ အဲဒီကိုယ်စားလှယ်က ငွေကိုးထောင် (၉၀၀၀)သာပေးပီး ဓါတ်မှန်ရိုက်ခပဲ ရှင်းပေးသွားပါတယ်။
နွားရှင်က နွားကိုရာဂဏန်းနီးပါး မွေးမြူပြီး ဒီလောက်တောင် ကရုဏာ ခေါင်းပါးသလားဗျာ။
ကလေးရဲ့မိခင်က ပုလင်းခွံကောက်ပီး ရောင်းတယ်၊ လဆန်းတစ်ရက်နေ့ ထီပေါက်စဉ် ရောင်းတယ်။ လင်ယောင်္ကျားနဲ့လည်း ကွဲနေတာ နှစ်ချီကြာနေပီ။ နေတာက ကျူးကျော်ရပ်ကွက်မှာ တစ်နှစ်လုံး ရေ၀ပ်နေတဲ့ အိမ်စုတ်သေးသေးလေးမှာပါ။
ဒီလောက်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးငယ်ကို ဆေးရုံက ဂရုစိုက်သလားမမေးနဲ့။ လှည့်တောင်မကြည့်ဘူး။
အဲဒီလို စေတနာအပြည့်နဲ့ အပြုအစုကောင်းတဲ့ ဆေးရုံနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပြည့်ဝတဲ့ နွားရှင်အမျိုးသားကောင်းတို့ရဲ့ ကောင်းမှုတွေ ကြာင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးငယ်လေးခမျာ (၅.၁.၂၀၁၃) နေ့မှာ သေဆုံးသွားခဲ့ ပါတယ်။
သေတော့မှ နွားရှင်ဘက်က( ကိုယ်စားလှယ်ပဲလာတာနော်) ငွေနှစ်သိန်းခွဲ ပဲနစ်နာကြေးဆိုပီး လာပေးပါတယ်။ ဒါတောင် သေသေချင်းတစ်သိန်းပဲ အရင်ပေးထားပီး ကျန်ငွေကို သဂြိုလ်ပီး မှ ပေးနိုင်မယ်တဲ့။ ဘယ်လောက်လူမဆန်လိုက်သလဲဗျာ။
ကျနော်ကိုလာအကူအညီတောင်းတော့ မနက် ၈း၃၀။ နေ့လည် ၁ နာရီိ သဂြိုလ်တော့မယ်။ အဲတော့မှ ကျနော်လည်း ချက်ချင်း အမှုဖွင့်ဖို့ အားချင်းလုပ်ရတော့တာပေ့ါ။ ကျနော် ရှေ့နေခမယူဘဲ စေတနာနဲ့ မခံချင်စိတ်ကြောင့် အကျိုးဆောင်ပေးတာပါ။
ကလေးအလောင်းက ဒဏ်ရာကို စစ်ဆေးမယ်ဆိုတော့ ပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်း ရင်ခွဲပြီးနေပြီ။ ဒီနေ့ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်နေတော့ဆေးရုံမှာ အလောင်းကို ဘာတွေစစ်ဆေးထားသလဲဆိုတာ မသိရတော့ သဂြိုလ်ဖို့ကို မနက်ဖြန် ရွှေ့လိုက်ရတယ်။
မနက်ဖြန် ဆေးရုံက ဒဏ်ရာမစစ်ဆေးပဲ ရင်ခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ ကျနော်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ နွားရှင်ကို စွဲထားတဲ့အမှုမှာ နွားကြောင့်ရတဲ့ဒဏ်ရာကြောင့် သေတာပါလို့ သက်သေပြဖို့ ခဲယဉ်းသွားပီလေ။ ဒါကြောင့် မနက်ဖြန် ဆေးရုံမှာ ကလေးရဲ့ ရင်ခွဲစစ်ဆေးချက် အဖြေကို ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြည့်ရတော့မယ်။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ကလေးငယ် မသေသင့်ဘဲ သေဆုံးရတာပါ။ ကလေးငယ်ကို ပြုစုကုသမှု လိုအပ်ခဲ့တဲ့ ဆေးရုံရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်လား။
လူမှုရေးမရှိ၊ ဂရုဏာမရှိတဲ့ စည်မဲ့ကမ်းမဲ့ နွားတွေကိုလွှတ်ကျောင်းတဲ့ ဘယ်သူသေသေငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ စီးပွားရေးသမား နွားရှင်ကြောင့်လား။
သေချာတာကတော့ သူတို့နှစ်ဦးစလုံး အပြစ်မကင်းကြပါဘူး။ ကြားထဲက အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်ကတော့…သနားစရာဗျာ….
အင်း……ဆင်းရဲ့မှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး ယိုးမယ်ဖွဲ့ အပြစ်တင်ရတော့မှာပေ့ါလေ။
ဆေးရုံကိုသွားစုံစမ်းတော့ သူတို့ ရင်ခွဲစစ်ဆေးပြီးသားမို့ ထပ်မစစ်ပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ (သူတို့က မှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့ ပုံစံနဲ့စစ်ဆေးတာလား…သာမန်အလောင်းစစ်ဆေးနည်းနဲ့စစ်ဆေးတာလား..ဆိုတာလည်း ရေရာသေချာတဲ့အဖြေ မရခဲ့ပါဘူး)
ကြားရတဲ့ သတင်းတွေကတော့ နွားရှင်က သူ့ကိုတရားစွဲလည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူးတဲ့. အကြောင်းက ဆေးရုံအုပ်နဲ့သူ အပေးအယူတွေနဲ့ အလောင်းစစ်ဆေးတာတွေကို သေချာစီမံထားလို့ပါတဲ့.(ရပ်ကွက်ထဲက ကြားရတဲ့သတင်းပါ) သေချာဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေထွက်မှပဲ သိရမှာပေ့ါ။
အကယ်ရွေ့များ ဆေးစစ်ချက်အဖြေက နွားကန်ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်ချက်များပါလာရင် နွားရှင်အပေါ် ကျနော်တို့ စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုက အဟောသိကံ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရဲစခန်းမှာ မနေ့က အမှုဖြစ်စဉ်တောင်မပြောရသေးဘူး စခန်းမှုးကဘာပြောလဲဆိုတော့ …ကလေးမသေဆုံးခင် ကုတင်ပေါ်က လိမ့်ကျတယ်မလားတဲ့…..
စဥ်းစားကြည့်ပါ….သူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိမ်အနက်က ဘယ်လိုဥိးတည်နေတယ်ဆိုတာ…ဆိုလိုတာ..ကလေးကပဲ ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ သေတဲ့ပုံစံမျိုး….
ကျနော်စဉ်းစားကြည့်တာတစ်ခုရှိတယ်..ကလေးက ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတာ ခေါင်းနဲ့လုံးဝမထိဘူး..ထိုင်လျှက်အနေအထားနဲ့ကျတာ။ ကုတင်ပေါ်ပြန်တင်တော့ နာတယ်ဆိုပြီး အော်ဟစ်ရင်း ဆုံးသွားတာပါ။ဒီတော့ စဉ်းစားမိတာက နွားကန်ခံရစဉ်က ရင်ညွန့်နံရိုးများ အကယ်ရွေ့ ကျိုးခဲ့ရင် သာမန်အခြေအနေမှာ မသိသာပေမယ့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားမိရင် ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေကို ကျိုးတဲ့နံရိုးက ထိုးစိုက်မိပြီး သေဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်ကြားဖူး တွေ့ဖူးလို့ပါ.
အခုကလေးလည်း ဒီလိုပဲလို့ကျနော် ထင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဆေးရုံမတက်ခင် ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်မှန်ကို အပြင်ဆရာဝန်က ကြည့်ဲပီး မေးရိုးကျိုးလို့ ချက်ချက်းဆေးရုံတက်ခိုင်းတာကို ရင်ခွဲစစ်တော့ မေးရိုးကို ခွဲစိတ်စစ်ထားတာ မတွေ့ရဘူး။
မနက်ဖြန်နေ့လည် ၁ နာရီမှာတော့ ကလေးငယ်ကို သဂြိင်္ုလ်ပါတာ့မယ်။
ဆေးရုံဆေးစာက ကျနော်တို့ အတွက် အသုံးမကျဘဲ နွားရှင်ဘက်က အသာပေးရေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က နွားရှင်ဘက်က မြှားကို ဆေးရုံဘက်ကို လှည့်ရတော့မယ်ထင်တယ်။ နွားရှင်ကို မိမိနစ်နာမှုအတွကိ အရေးဆိုရာကနေ နောက်ထပ် လူအများ ကလေးငယ်လို ဆေးရုံရဲ့ ပေါ့ဆကုမှုကြောင့် မလိုလားအပ်ဘဲ အသက်မဆုံးရုံးရအောင် လုပ်ဆောင်ရတော့မယ်လေ။
ကလေးရဲ့မိဘတွေဘက်က အရှင်ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်)ကို လိုအပ်လာရင် အကူအညီတောင်းဖို့နဲ့ မဖြစ်မနေအခြေအနေရောက်ခဲ့ရင် ကလေးငယ်ကို သာဓကပြပြီး ဆေးရုံတွေရဲ့ ပေါ့ဆမှု၊ ဂရုမစိုက်မှု၊ အလေးအနက်မထားမှု၊ တို့ကို သိရှိပြုပြင်နိုင်ဖို့ ဆန်ဒ ဖော်ထုတ်ကြမယ်လို့လဲ ကြားသိရပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ. ကျနော်ကတော့ ဥပဒေဘောင်ထဲက အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရွေးစေချင်တယ်။
အကယ်ရွေ့နစ်နာသူဘက်က အမှန်တရား ရပ်တည်မှုမရှိ်လို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ကလေးမိဘနဲ့ အမှန်တရားမြတ်နိုးသူတွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ထောက်ခံအားပေးကြမှာလား….လို့ မေးချင်ပါတယ်ဗျာ..
(၁)…. ဆေးရုံကိုသွားစုံစမ်းတော့ သူတို့ ရင်ခွဲစစ်ဆေးပြီးသားမို့ ထပ်မစစ်ပေးနိုင်ပါဘူးတဲ့။ (သူတို့က မှုခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ဆေးတဲ့ ပုံစံနဲ့စစ်ဆေးတာလား…သာမန်အလောင်းစစ်ဆေးနည်းနဲ့စစ်ဆေးတာလား..ဆိုတာလည်း ရေရာသေချာတဲ့အဖြေ မရခဲ့ပါဘူး) ကြားရတဲ့ သတင်းတွေကတော့ နွားရှင်က သူ့ကိုတရားစွဲလည်း ဂရုမစိုက်ပါဘူးတဲ့. အကြောင်းက ဆေးရုံအုပ်နဲ့သူ အပေးအယူတွေနဲ့ အလောင်းစစ်ဆေးတာတွေကို သေချာစီမံထားလို့ပါတဲ့.(ရပ်ကွက်ထဲက ကြားရတဲ့သတင်းပါ) သေချာဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ဆေးစစ်ချက်အဖြေထွက်မှပဲ သိရမှာပေ့ါ။ အကယ်ရွေ့များ ဆေးစစ်ချက်အဖြေက နွားကန်ဒဏ်ရာကြောင့် သေဆုံးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ သုံးသပ်ချက်များပါလာရင် နွားရှင်အပေါ် ကျနော်တို့ စွဲဆိုထားတဲ့ အမှုက အဟောသိကံ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရဲစခန်းမှာ မနေ့က အမှုဖြစ်စဉ်တောင်မပြောရသေးဘူး စခန်းမှုးကဘာပြောလဲဆိုတော့ …ကလေးမသေဆုံးခင် ကုတင်ပေါ်က လိမ့်ကျတယ်မလားတဲ့….. စဥ်းစားကြည့်ပါ….သူပြောလိုက်တဲ့စကားအတိမ်အနက်က ဘယ်လိုဥိးတည်နေတယ်ဆိုတာ…ဆိုလိုတာ..ကလေးကပဲ ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျလို့ သေတဲ့ပုံစံမျိုး…. ထမင်းစားကြည့်တဲ့သူတိုင်း စဉ်းစားတတ်ပါတယ်….. ကျနော်စဉ်းစားကြည့်တာတစ်ခုရှိတယ်..ကလေးက ကုတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတာ ခေါင်းနဲ့လုံးဝမထိဘူး..ထိုင်လျှက်အနေအထားနဲ့ကျတာ။ ကုတင်ပေါ်ပြန်တင်တော့ နာတယ်ဆိုပြီး အော်ဟစ်ရင်း ဆုံးသွားတာပါ။ဒီတော့ စဉ်းစားမိတာက နွားကန်ခံရစဉ်က ရင်ညွန့်နံရိုးများ အကယ်ရွေ့ ကျိုးခဲ့ရင် သာမန်အခြေအနေမှာ မသိသာပေမယ့် ပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားမိရင် ကိုယ်တွင်း ကလီစာတွေကို ကျိုးတဲ့နံရိုးက ထိုးစိုက်မိပြီး သေဆုံးတတ်တယ်ဆိုတာ ကျနော်ကြားဖူး တွေ့ဖူးလို့ပါ. အခုကလေးလည်း ဒီလိုပဲလို့ကျနော် ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆေးရုံမတက်ခင် ရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်မှန်ကို အပြင်ဆရာဝန်က ကြည့်ဲပီး မေးရိုးကျိုးလို့ ချက်ချက်းဆေးရုံတက်ခိုင်းတာကို ရင်ခွဲစစ်တော့ မေးရိုးကို ခွဲစိတ်စစ်ထားတာ မတွေ့ရဘူး။
မနက်ဖြန်နေ့လည် ၁ နာရီမှာတော့ ကလေးငယ်ကို သဂြိင်္ုလ်ပါတာ့မယ်။ ဆေးရုံဆေးစာက ကျနော်တို့ အတွက် အသုံးမကျဘဲ နွားရှင်ဘက်က အသာပေးရေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က နွားရှင်ဘက်က မြှားကို ဆေးရုံဘက်ကို လှည့်ရတော့မယ်ထင်တယ်။ နွားရှင်ကို မိမိနစ်နာမှုအတွကိ အရေးဆိုရာကနေ နောက်ထပ် လူအများ ကလေးငယ်လို ဆေးရုံရဲ့ ပေါ့ဆကုမှုကြောင့် မလိုလားအပ်ဘဲ အသက်မဆုံးရုံးရအောင် လုပ်ဆောင်ရတော့မယ်လေ။ ကလေးရဲ့မိဘတွေဘက်က အရှင်ဦးဝီရသူ(မစိုးရိမ်)ကို လိုအပ်လာရင် အကူအညီတောင်းဖို့နဲ့ မဖြစ်မနေအခြေအနေရောက်ခဲ့ရင် ကလေးငယ်ကို သာဓကပြပြီး ဆေးရုံတွေရဲ့ ပေါ့ဆမှု၊ ဂရုမစိုက်မှု၊ အလေးအနက်မထားမှု၊ တို့ကို သိရှိပြုပြင်နိုင်ဖို့ ဆန်ဒ ဖော်ထုတ်ကြမယ်လို့လဲ ကြားသိရပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ. ကျနော်ကတော့ ဥပဒေဘောင်ထဲက အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပြီးမှ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရွေးစေချင်တယ်။ အကယ်ရွေ့နစ်နာသူဘက်က အမှန်တရား ရပ်တည်မှုမရှိ်လို့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို ကလေးမိဘနဲ့ အမှန်တရားမြတ်နိုးသူတွေက လုပ်ဆောင်ခဲ့ရင် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ထောက်ခံအားပေးကြမှာလား….လို့ မေးချင်ပါတယ်ဗျာ…..
← မေးခွန်း (၃) ခု ၊ ဒေါက်တာအေးချမ်း မှဖြေကြားပေးပါ။
တက္ကသိုလ်မှ ကာတွန်း သင်ခန်းစာ တပုဒ် (ကာတွန်း ဦးဟိန်းစွန်း) →